Top 5 dòng Son YSL màu nào đẹp nhất được chị em ưa chuộng | Vbid.vn - Vbid.vn
Bạn đang đọc: Top 5 dòng Son YSL màu nào đẹp nhất được chị em ưa chuộng | Vbid.vn in vbid.vn
Ọ bụrụ na ị na-achọ ma họrọ onwe gị 1 ahịrị lipstick Ọkpụkpọ lipstick YSL dị oke mma, mara mma, bụ ntụnye zuru oke maka gị. Na ya na-ekpo ọkụ, YSL lipstick akpan akpan na nke a ịchọ mma ika n’ozuzu, kere ọhụrụ ife nke bụ nnọọ ọhụrụ na ọhụrụ. Soro nyocha phong ka ị chọpụta ahịrị ise kacha elu lipstick YSL Agba kachasị mma taa na-amasị ụmụ nwanyị na isiokwu dị n’okpuru!
1 Banyere ahịrị lipstick YSL
2 Ahịrị lipstick YSL dị ugbu a
3 lipstick YSL ọ dị mma? (ichepụta, lipstick, agba, njigide agba)
3.1 Banyere imewe
3.2 Banyere lipstick
3.3 Banyere agba
3.4 Banyere njide agba
4 Ahịrị lipstick YSL 5 kacha mma ka ụmụ nwanyị hụrụ n’anya ugbu a
4.1 1. YSL Pur Couture The Mat
4.2 2. YSL Fiery Red lipstick ahịrị
4.4 4. YSL Tatouage Couture Ude Lipstick Line
4.5 5. YSL Vinyl Cream egbugbere ọnụ
Banyere ahịrị lipstick YSL
Site na akara French ama ama YSL, a na-emepụtakwa ahịrị lipstick YSL ozugbo na France. Nke a bụ isi ụlọ ọrụ lipsticks nke na-enweghị ebe ọzọ nwere ike iweta ezigbo lipsticks. Ọkpara YSL ewepụtara ya na 1978 wee bụrụ ụlọ ịsa ahụ mara mma nke ọtụtụ ụmụ nwanyị na-achọ.
Ọbụghị naanị na ọ nwere ọmarịcha ọmarịcha ọmarịcha klaasị, mana ogo lipstick YSL dịkwa ezigbo ụtọ na silk. Adhesion nke lipstick dị ezigbo mma mana ọ naghị akpata nkụ na ahụ erughị ala mgbe etinyere ya na egbugbere ọnụ. N’ihi na ọ bụ akara dị elu, ọnụ ahịa lipstick dịkwa oke ọnụ, tupu ị kpebie ịzụta, ị kwesịrị ịtụle ma họrọ agba lipstick kacha mma maka gị!
Ahịrị lipstick YSL dị ugbu a
Na ahịa taa, akara lipstick YSL a na-ekewa n’ime ahịrị 7 dị iche iche iji gboo mkpa ụmụ nwanyị nke ọma. Ka anyị leba anya n’ahịrị lipstick ndị a ma ama ugbu a:
Lipstick YSL Babydoll Kiss na ihie
lipstick YSL ọ dị mma? (ichepụta, lipstick, agba, njigide agba)
Iji nwee ike ịmata lipstick YSL Ọ dị mma, ka anyị nyochaa n’ụzọ zuru ezu nhazi, àgwà, agba na njigide agba nke ahịrị lipstick a!
Imewe mara oke mma, nwanyị nwere obi ike. Ahịrị lipstick YSL abụghị naanị na-elekwasị anya na lipstick ọ bụla, mana ọdịdị nke osisi lipstick YSL na-elekwasịkwa anya nke ukwuu site n’aka onye nrụpụta. Iji gosi okomoko na klas nke onye nwe lipstick. Ahịrị imewe nke lipstick mara mma nke ukwuu na nke siri ike na mkpuchi metal dara oké ọnụ.
YSL nwere lipstick na-egbuke egbuke na nke na-adịghị mma. N’adịghị ka ụdị ndị ọzọ a ma ama, lipsticks na-eche naanị banyere ịgbaso ahịrị lipstick matte dị elu. Mgbe ahụ YSL họọrọ inwe ahịrị egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, mana ka na-eweta mmetụta nke okomoko ọ bụghị n’ime ime obodo niile. Njikere imeri ụmụ nwanyị nwere egbugbere ọnụ dị nro ma ọ bụghị egbugbere ọnụ dị arọ. Ngwakọta nke lipstick nwere ọtụtụ ihe na-edozi ahụ, nke na-adịghị eme ka egbugbere ọnụ kpọrọ nkụ. Kwesịrị ekwesị maka ojiji na ihu igwe akọrọ n’oge oyi.
Ọkpara YSL nwere palette agba bara ụba. Ị nwere ike ịhụ agba lipstick ọ bụla masịrị gị. Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ọnọdụ, ụdị akpụkpọ anụ dị iche iche na YSL na-emelite mgbe niile na usoro etemeete kachasị ọhụrụ.
Banyere njide agba
Ọtụtụ lipsticks YSL nwere ikike idobe agba na egbugbere ọnụ ruo ogologo oge, na-adịru site na awa 5-7 n’emeghị ka egbugbere ọnụ ma ọ bụ iri nri na-ata ya.
Site na nyocha zuru ezu n’elu, anyị nwere ike ịhụ na lipstick YSL bụ ahịrị ngwaahịa dị mma. Ka anyị rụtụ aka na ngalaba na-esote ka ịghọta n’elu 5 kacha mma agba lipstick YSL!
Ngwaahịa na-ere 50% Belips sexy lipstick 100% eke, enweghị ndu, nchekwa maka ụmụ nwanyị dị ime, BELIPS lipstick Matte, ọmarịcha ọmarịcha, agba ọkọlọtọ Korea G9Skin mbụ V-Fit Velvet Tint 3.5g, G9SKIN Bbia Ikpeazụ Velvet egbugbere ọnụ Tint Version 1 5g (agba ise), BBIA [V1-V18] Merzy Mbụ Velvet Tint Korea Merzy Nke mbụ Velvet Tint, Merzy Lemonade chọrọ ọ nwetara ya lipcream 5g, lemonade Black Rouge Air Fit Velvet Tint – Korea, Black Rouge Set nke 4 Daishiao Matte lipsticks (Nye igbe 1 mara mma ma dị mma), DAIShiaO
Ahịrị lipstick YSL 5 kacha mma ka ụmụ nwanyị hụrụ n’anya ugbu a
Son YSL bụ ahịrị lipstick ama ama na ewu ewu ụbọchị ndị a. Agbanyeghị, kedu nke kacha mma agba lipstick? Nyocha phong ga-ekpughere gị 5 kacha elu lipstick YSL Agba kachasị mma, nke ọtụtụ ụmụ nwanyị hụrụ n’anya n’ahịa taa.
1. YSL Pur Couture The Mat
Ọ bụ egwu SYL ama ama nke ọtụtụ ụmụ agbọghọ mara mma na-ahụ n’anya. YSL Pur Couture The Mats lipstick nwere ọmarịcha imewe, nwere lipstick dị larịị, agba ọkọlọtọ. N’ozuzu, ihe niile zuru oke. Site na imewe shei agba nwere ụda ọla edo dara okomoko jikọtara ya na ụdị aristocratic. Akara akara a na-apụta mgbe niile ma bụrụ ihe dị mkpa maka ngwaahịa a. Mgbe ị na-eji, ị ga-enwe mmetụta ijide aka.
Egbugbere ọnụ matte dị nro, ọ bụghị nke dị nro mgbe etinyere ya na egbugbere ọnụ, lipstick na-etinye ngwa ngwa ma dị mfe itinye na egbugbere ọnụ. N’otu oge ahụ, eriri lipstick a nwekwara ike ikpuchi ezughị okè na egbugbere ọnụ nke ọma. Na-ebelata ihe ruru 80% nke ahịrị egbugbere ọnụ, na-enyere egbugbere ọnụ ụmụ nwanyị aka ito n’ụzọ nkịtị. Ọzọkwa, isi ihe dị na YSL Pur Couture The Mats lipstick na-ewepụtara kpamkpam site na okike, na-enye nchebe anyanwụ SPF15 iji belata egbugbere ọnụ gbara ọchịchịrị nke ọma.
Oge njigide agba na egbugbere ọnụ na-adị site na awa 4-6. Naanị ị ga-etinye lipstick dị ọkụ na egbugbere ọnụ gị ga-adị ire ụtọ ma jupụta na ndụ. Acha uhie uhie dị ọcha na-eweta ntorobịa, dynamism, dabara adaba maka afọ niile. Nke a bụkwa ụcha lipstick YSL nke enwere ike jikọta ya na ụdị etemeete dị iche iche. Ọ naghị adọrọ mmasị banyere ụcha akpụkpọ ahụ, yabụ ụmụ agbọghọ nwere akpụkpọ ahụ na-acha ọcha, ọchịchịrị ma ọ bụ odo odo nwere ike iji ya.
Ọnụ ego ntụaka: 470,000 VND.
2. YSL Fiery Red lipstick ahịrị
YSL Fiery Red bụ ahịrị lipstick ọhụrụ ewepụtara na ahịa ịchọ mma n’ime obere oge. Mgbe mbụ a tọhapụrụ ya, lipstick a ghọrọ ihe nzuzu ngwa ngwa. Nwanyị ọ bụla nwere mmasị na mmasị na ahịrị lipstick a pụrụ iche. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ekwukwa njakịrị, nke a bụ ahịrị lipstick ga-enwerịrị n’oge mgbụsị akwụkwọ oyi na oyi.
YSL ọkụ na-acha uhie uhie mgbe etinyere ya na egbugbere ọnụ bụ ezigbo ọkọlọtọ, ile anya egbugbere ọnụ gị ga-amasi nke ukwuu. Kwesịrị ekwesị maka iji mee ihe n’èzí ma ọ bụ nnọkọ oriri na ọṅụṅụ. Ọ bụghị naanị inwe ezigbo lipstick, ọmarịcha ọmarịcha, agba ọdịda anyanwụ, mana lipstick a nwekwara ihe pụrụ iche, juputara na ihe omimi.
lipstick ọkụ na-acha uhie uhie YSL A na-ejikwa akpa ọla na-acha ọla edo na-esighị ike were rụọ ya. Mgbe ejiri ya n’aka, ọ na-enwe ahụ iru ala ma mara mma. Ọ bụ okomoko na oke ọkwa. A na-eji bevel dị ka anya mmiri mee ihe YSL Fiery Red lipstick, na-eme ka ọ dị mfe itinye n’egbugbere ọnụ. Ozokwa, ọ na-enyere ha aka ijide egbugbere ọnụ ha nke ọma karị.
Ọnụ ego ntụaka: 540,000 VND.
Kemgbe mmalite nke YSL Rouge Pur Couture The Slim lipstick, ọ bụrụla ihe nzuzu ngwa ngwa. Ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ n’anya ma na-ezo aka dị ka “nwanyị na-acha uhie uhie” na agba lipstick ndị ọzọ.
YSL Rouge Pur Couture lipstick Slim nwere ọmarịcha shei elu dị gịrịgịrị. Emebere ọnụ ọnụ lipstick na bevel diagonal dị nkọ iji nyere ụmụ nwanyị aka ịbịaru ahịrị egbugbere ọnụ karịa. YSL Rouge Pur Couture The Slim Lipstick Mgbe etinyere ya na egbugbere ọnụ, ọ na-adị nro, dị nro na ịdị arọ.
Na nhazi nke ahịrị lipstick a nwere ntakịrị ihe oriri na-edozi ahụ, ya mere egbugbere ọnụ ga-ejupụta ma mara mma. Ogo nke Vinyl Cream Lip Stain dị ezigbo mma ma ọ naghị emegharị ahụ mgbe ị na-ata egbugbere ọnụ gị. Mgbe a na-ahapụ ya ogologo oge, ọ ga-ahapụ akwa akwa nke tint na agba ọkụ na egbugbere ọnụ.
Ọnụ ego ntụaka: 469,000 VND.
4. YSL Tatouage Couture Ude Lipstick Line
Ugbu a lipstick YSL Tatouage Couture Nwee atụmatụ na-ewu ewu, nke na-adọrọ adọrọ nke nwere ahịrị mara mma nke ukwuu. Mkpuchi ọla nwere ụda ọla edo na akara YSL mara mma. Ijide lipstick YSL a n’aka, ị ga-enwe mmetụta na ịdị mma.
A na-enwe ekele maka lipstick dị mma nke YSL Tatouage Couture, dị ezigbo ụtọ, dị oke mma ma dịkwa mfe ịgwakọta. Karịsịa, matte imecha na egbugbere ọnụ bụ ibu elu. N’ime ihe mejupụtara lipstick YSL Tatouage Couture a, enwere mmiri na-ekpo ọkụ, yabụ na ọ nwere ike kpuchie egbugbere ọnụ nke ọma. Tinye aka na-azụ egbugbere ọnụ gị karịa nke ukwuu, juputara na ndụ.
N’etiti agba lipstick, agba oroma-acha ọbara ọbara nke YSL Tatouage Couture na-amasị ọtụtụ ụmụ agbọghọ. Na agba na-egbuke egbuke ma na-eto eto, ọ na-enyere ụmụ agbọghọ aka inwekwu obi ike mgbe ha na-arụ ọrụ. Agba uhie-oroma nwere ike dị mma zoro ezo. Nwere ike kpalie ndị ọzọ.
Ọnụahịa ntụaka: 350,000 VND.
5. YSL Vinyl Cream egbugbere ọnụ
YSL Vinyl Cream Lip Stain line bụ ahịrị lipstick nwere ụda na-eto eto, mara mma na nke pụtara ìhè n’ebe ọ bụla, na-eme ka obi nde nde ụmụ agbọghọ “ọchịchọ inwe”. YSL Vinyl Cream Lip Stain bụ ahịrị lipstick French dị elu nke na-ewu ewu na ụmụ nwanyị gburugburu ụwa nwere ụda na-ewu ewu.
YSL Vinyl Cream Lip Stain maka agba ziri ezi, mgbe etinyere ya na egbugbere ọnụ, egbugbere ọnụ na-adị ka lipstick dị nro, dị nro ma dịkwa mma, na-edozi egbugbere ọnụ.
Vinyl Cream Lip Stain na-eweta agba na-egbuke egbuke, na-eto eto zuru oke na-enweghị oke cheesy, ndò a na-enye onye ọrụ mma mma na-adọrọ adọrọ nke jupụtara na nkọ.
Lipstick nwere ihe ndị na-edozi ahụ dị nro, gbakwunyere oke mmiri dị elu iji nyere aka mee ka egbugbere ọnụ nke ụmụ agbọghọ na-adaba mgbe niile, na-adọrọ mmasị na ịma mma na-egbuke egbuke. YSL Vinyl Cream Lip Stain na-adịte aka, na-eme ka egbugbere ọnụ gị dị ọhụrụ ogologo ụbọchị dum.
Egbugbere ọnụ nke Vinyl Cream Lip Stain dị ezigbo ụtọ dị ka ezigbo akpụkpọ anụ, ìhè na egbugbere ọnụ ya na elu lipstick dị gịrịgịrị ma dị ọkụ dị ka akpụkpọ anụ nke abụọ. Vinyl Cream Lip Stain nwere ike ịdịru ogologo oge site na 5 ruo 7 awa na-aga n’ihu – Nke a bụ ọnụọgụ dị egwu maka lipstick matte na-edozi ahụ nke ọma.
Ọnụ ego ntụaka: 590,000 VND.
Isiokwu dị n’elu bụ ahịrị 5 kacha elu lipstick YSL nke kachasị mma, na-ewu ewu n’oge a. Olileanya, site na isiokwu a, ị ga-ahọrọ lipstick kacha mma maka onwe gị. Echefula iso Nyochaa Phong ka ị nweta ozi bara uru karị!
Xem Thêm Unlocker là gì? Hướng dẫn cách tải và cài đặt đơn giản nhất | Vbid.vn
Shopee Affiliate là gì? Cách kiếm tiền với Affiliate hiệu quả nhất | Vbid.vn
Tiếp thị liên kết là cơ hội tuyệt vời để ai cũng có thể tăng thu nhập ngay tại nhà, nhất là trong thời điểm khó khăn của bệnh Covid-19, nhiều bạn muốn đăng ký học cách kiếm tiền. Bổ sung Shopee. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có ý tưởng tốt nhất […]
Top 8 Dung dịch vệ sinh phụ nữ nào tốt bác sĩ khuyên dùng | Vbid.vn
Sữa tiểu đường Glucerna có tác dụng gì? Chế độ ăn tốt nhất cho người bị tiểu đường | Vbid.vn